LG Magna na vidiyo sitere na MWC 2015 na Barcelona | Androidsis
Francisco Ruiz | | LG, MWC, Nyocha
LG ekpebiela ịkụ nzọ siri ike na etiti etiti. Ma ọ bụ na ndị na-emepụta Korea gosipụtara ngwaọrụ ọhụrụ ya n'oge na-adịbeghị anya LG Leon, Magna na Mmụọ gbadoro anya na ahịa a. Anyị egosila gị a LG Leon nyochaa vidiyo, ugbu a ọ bụ gị oge igosi gị niile nzuzo nke ọzọ ha ọhụrụ smartphones.
Na ndị otu Androidsis agaala LG stand na MWC iji gosi gị na LG Magna na vidiyo, ngwaọrụ dị n'etiti mana nwere njirimara karịrị nke ezuru maka ọtụtụ ndị ọrụ.
LG Magna, ihuenyo 720 na quad-core processor
N'ime etiti etiti nke onye nrụpụta Seoul gosipụtara, LG Magna bụ eze ekele maka atụmatụ ọrụ ya na imewe ya. Dị ka ụmụntakịrị ya, ngwaọrụ a nwere bọtịnụ njikwa ike na olu na azụ, ọ bụ ezie na ọ bụ nke kachasị ukwuu n'ihe gbasara nha ihuenyo.
Ma ọ bụ na LG Magna nwere a 5 inch LCD ihuenyo nke ahụ ruru 249 dpi. Ihe nrụpụta ya bụ Qualcomm Snapdragon 410 soC, yana 1 GB nke RAM na 8 GB nke nchekwa dị n'ime.
Mee ka igwefoto n'azụ megapixel 8 pụta ìhè yana ọrụ autofocus, na mgbakwunye na inwe a Igwefoto n'ihu megapixel 5 maka ngosipụta onwe. Batrị 2.540mAh dị ya maka ịkwado ngwaike niile nke ngwaọrụ a.
A ọnụ na, n'agbanyeghị ịbụ mee polycarbonate, ọ na-atọ ụtọ n'ezie. Anyị amaghị ụbọchị mmalite ma ọ bụ ọnụ ahịa ngwaọrụ a, mana a na-atụ anya na ọ ga-abịa n'ahịa ma emechaa n'ọnwa a ma ọ bụ n'April na-esote. N'ịmara amụma ọnụahịa nke onye nrụpụta Korea, ọ ga-abụ na LG Magna na-efu n'etiti euro 150 na 200.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » MWC 2015: LG Magna na vidiyo. Onye na-akpali gam akporo n'etiti
Ọ dị ka ike anaghị agwụ lg iwepụta ọnụ ụzọ etiti